TikTok weputara WhatsApp nke ya ma kwadebe Spotify maka China | Gam akporosis
Ngwa ahụ TikTok Ọ na-aghọ ezigbo isi ọwụwa maka isi netwọkụ mmekọrịta. Anyị na-ekwu maka ọrụ na-agwakọta Musical.ly, Instagram na Vine iji mee ka onye nke ọdụdụ nwetakwuo, ruo n'ókè ọ ruru. machibidoro iwu nwa oge na India n'ihi ogo nke ahụ riri ya n'etiti ndị ọrụ ya.
Mana, ọ dị ka ọrụ a ewu ewu ezughi ezu: TikTok ka kwuputara mwepụta nke Ntughari, Ozi ngwa ngwa maka gam akporo na iOS nke ga-agụnye oku vidiyo na obodo nke forums. Mba, ọ gaghị enwe ike ịme ihe ọ bụla na China, ebe WeChat bụ eze nwanyị zuru oke. Mana o nwere ebumnuche dị iche maka ahịa Eshia.
Na mgbakwunye na FlipChat, TikTok na-ezube ịmepụta Spotify na China
Site na ihe anyị mụtara, ụlọ ọrụ na-akpata mmepe nke ngwa a na-aga nke ọma na-arụ ọrụ iji mepụta ọrụ egwu egwu na-akwụ ụgwọ yana nhọrọ akwụ ụgwọ yana ụdị nweere onwe ya na mgbasa ozi. Ee, usoro otu ihe ahụ dị ka Spotify.
Echiche nke Bytedance, ụlọ ọrụ nwere TikTok, ga-abụ nnukwu dị ka Facebook, na-enye ụdị ọrụ ọ bụla, dịka netwọkụ mmekọrịta ya, ọrụ izi ozi ngwangwa na ọrụ egwu egwu na-ebugharị. Na mgbakwunye, ọrụ ndị a ga-erute India na China mbụ, ahịa kacha baa uru maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ibudata Flipchat na ụlọ ahịa ngwa ngwa Google, yabụ ị ga-eche ka ha bido Spotify nke ha. TikTok izi ozi ngwa ngwa ọ ga-aga nke ọma? O doro anya na ọ bụghị na Europe, ebe ọha na eze na-aga n'ihu ịkụ nzọ na WhatsApp na Telegram iji kwurịta okwu.
Ma echiche nke inwe a gụgharia music ọrụ nwere ike mpi na Spotify nwere ike ime ka ihe karịrị otu onye ọrụ nzọ na ngwọta nke TikTok, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ na-abịa na ọnụahịa dị oke ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » TikTok amalitela WhatsApp nke ya. Ebumnuche na-esote? A Spotify maka China
Egwuregwu nke n'ocheeze ofufe? Echefula mbipụta a nke Samsung Galaxy Fold